Iimbangela kunye neempawu ze-meningitis. – Noor Health Life
Iimbangela kunye neempawu ze-meningitis.
Usuku lweHlabathi lweMeningitis lubhiyozelwa kwihlabathi liphela ngomhla wamashumi amabini anesine kuTshazimpuzi. Ngolu suku kulungiselelwe iisemina neenkomfa ezahlukahlukeneyo zokwazisa ngalo mkhuhlane ukuze abantu bazi ngeempawu, oonobangela, unyango nothintelo lwalo mkhuhlane. Kuqikelelwa ukuba lo mkhuhlane uchaphazela abantu abangaphezu kwesigidi ehlabathini lonke nyaka ngamnye. I-Meningitis inokuchaphazela abantu bayo yonke iminyaka, nokuba bancinci okanye badala. Unyango lwangexesha lubaluleke kakhulu, ukuba umkhuhlane ufikelela kwinqanaba eliyingozi, unokumbulala umguli osulelekileyo, ngoko kufuneka kulumke.
Indalo yenze awona malungiselelo angcono kwingqondo yomntu kunye ne-cerebellum kwaye iye yawagcina kwiinwebu ezintathu ezenza zikhuseleke kwiingozi ezahlukeneyo kunye nezifo. Ezi inwebu zinokuchatshazelwa kukwenzakala entloko, iintsholongwane ezingena egazini, izifo zempumlo neendlebe, kunye nemeningitis.
1. Kwi-meningitis, isigulane siqala sibe nomkhuhlane ophezulu.
2. Ukuba umntwana unomkhuhlane, uhlala ekhala.
3. Akukho nto ikwenza ufune ukutya okanye ukusela.
4. Njengoko umkhuhlane ukhula, isigulane esichaphazelekayo siqala ukuxhuzula.
5. Amabala abomvu avela emzimbeni.
6. Ukonqena emehlweni kuyaphela.Iinkophe zihamba kancinci kakhulu.
7. Enye yeempawu ezibalulekileyo kukungaguquki intamo Intamo ayiphili kakuhle kwaye isigulane asikwazi ukuphakamisa intamo.Inokuba yingozi kangakanani i-meningitis kwixesha elizayo?
EGeneva: Ingxelo ekhutshwe yiWorld Health Organization (WHO) idize ukuba umntu omnye kwabahlanu uza kuba nengxaki yokuva kwiminyaka ezayo ngenxa yemeningitis nezinye izinto.
Ngokutsho kwamajelo eendaba ehlabathi, ingxelo ekhutshwe yiWorld Health Organization idize ukuba abantu abaninzi ehlabathini banengxaki yokuva.
Ingxelo ekhutshwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi
Ngokutsho kwakhe, ukwanda kwe-meningitis kunye nokungabikho kolwazi malunga nayo kunokuba nzima kakhulu kuba i-meningitis ihambelana ngqo nokuva.
Ngokutsho kweengcali zonyango, i-meningitis ichaphazela kakhulu ingqondo kunye neeseli zokuva, nto leyo eyenza ukuba umyalezo ufikelele ebuchotsheni unqunyulwe.
Iingcali ze-WHO zithi le meko inzima inokuconjululwa kuphela ngokunciphisa ingxolo kwiindawo zikawonke-wonke nokubonelela ngoncedo lwezonyango ngexesha elifanelekileyo.
Ingxelo yokuqala yehlabathi yokuva ekhutshwe yi-WHO ithi “kumashumi amathathu eminyaka ezayo, inani labantu abangevayo liza kunyuka ngaphezu kwe-1.5%, oku kuthetha ukuba umntu omnye kwabahlanu uza kuba neengxaki zokuva.” ۔
Ingxelo ithi “ukwanda okulindelekileyo kwiingxaki zokuva kubangelwa ukwanda kwenani labantu, ungcoliseko lwengxolo kunye neendlela zabemi.”
Ingxelo yoMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) iphinda ichaze izizathu zokungeva kakuhle ngenxa yokungabikho koncedo lwezempilo kunye nokungabikho kwabasebenzi bezonyango kumazwe anengeniso ephantsi.
Ingxelo ithi “amashumi asibhozo ekhulwini (80%) abantu abakumazwe anje baneengxaki zokungeva kakuhle, uninzi lwabo olungafumani ncedo lwamayeza, ngelixa amazwe atyebileyo engafumani ncedo lwezempilo ngenxa yokwanda kwabantu. Ungathumela i-imeyile kwiNoor Health Life ngemibuzo engaphezulu kunye neempendulo. noormedlife@gmail.com